ကျနော်မလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ ဈေးဆစ်ခြင်းပါပဲ၊ ဈေးဆစ်ရမှာကို ကျနော် အင်မတန်ဝန်လေး သလို ဈေးဆစ်လည်းမကျွမ်းကျင်ပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဈေးဆစ်ပြီးမှ ဝယ်ရမယ့်နေရာ တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပါတယ်၊ မတတ်သာလို့ ပစ္စည်းတခုကို ဈေးဆစ်ပြီးဝယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တကယ်ကို စိတ်ညစ်ရပြီ၊ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်ဆစ်လိုက်တာများ, များသွားမလားဆိုပြီး အား နာနေရသလို တဖက်ကလည်း ကိုယ်ဆစ်လိုက်တာ နည်းသွားလို့ မတန်တဆပေးလိုက် ရမှာကို စိုးရိမ်နေရ လို့ပါပဲ။
ကျနော်ငယ်စဉ်တုန်းက အမေခိုင်းလို့ ဈေးသွားဝယ်ရတိုင်း အဆီအငေါ် မတည့်စွာနဲ့ ပြန်လာရတာများပါတယ်၊ ကျနော်က ဈေးသည်ပြောတဲ့ ဈေးအတိုင်းဝယ်ချလာတော့ အိမ်ရောက်တဲ့အခါ ပြဿနာဖြစ်တော့တာပါပဲ၊ အမေက ကျနော် မတန်တဆပေးခဲ့ရလေခြင်း ဆိုပြီးနှမြောနေတဲ့အခါ ကျနော်ကလည်း အပြစ်လုပ်မိသူ တစ်ယောက်လို စိတ်လက်မအီမသာ ဖြစ်ရစမြဲ၊ နောက်တော့ ကျနော့်ကို တခုခုသွားဝယ်ခိုင်းတိုင်း အမေက ဈေးဆစ်ဖို့ သတိ ပေးရသလို ခန့်မှန်းခြေဈေးနှုန်းကိုလည်း ပြောရလေ့ရှိပါတယ်၊ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အမေပြောတဲ့ ဈေးအတိုင်း မဆစ်တတ်ဆစ်တတ်နဲ့ဆစ်ရင်း နဲနဲအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတခါ ကျနော့်အရိပ်အကဲ ကိုကြည့်ပြီး ဈေးသည်က ‘ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါအရင်ကဈေး..အခုအဲဒီ ဈေးနဲ့မရတော့ဘူး၊ ဈေးတက်သွားပြီ’ လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါ ကျနော်တွေဝေသွားတတ်ပါတယ်၊ ‘သူငါ့ကို ဈေးတင် ရောင်းမလို့များလား’လို့တွေးပြီး ဈေးသည်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကျင့်သားရနေတဲ့ ဈေးသည်တွေက မျက်နှာ သေတွေနဲ့၊ ကျနော့်လို ကလေးတစ်ယောက်က ဘယ်လိုမှ အကဲမခတ်နိုင်ပါဘူး။ မဝယ်ဘဲ ပြန်သွားရင်လည်း အမေက ကြိုက်မှာမဟုတ်...၊ ဒီလိုနဲ့ သူပြောတာ ဟုတ်မှာပါပဲလေ ဆိုပြီးဝယ်လိုက်တဲ့အခါ အိမ်ရောက်တော့ ‘အင်း...ငါ့သားတော့ နှပ်ချခံလိုက် ရပြန်ပြီ’ ဆိုတာနဲ့ အမြဲတိုးပါတယ်၊ အဲဒီလို အခါတိုင်းမှာဈေးနဲနဲ ပိုပေးရလို့ နှမြောတဲ့ ခံစားမှုထက် ဈေးသည်ရဲ့ မဟာဗျူဟာအောက်မှာ သတိထား အကဲခတ်နေရဲ့သားနဲ့ နှပ်ပစ်ခံလိုက် ရလို့ မချိတင်ကဲဖြစ်ရတဲ့ ခံစားမှုက ပိုပါတယ်၊ ကျနော့်နောက်ဖက်မှာ ‘မင်းနုပါသေးတယ်ကွာ’ဆိုတဲ့ အသာစီး အပြုံးနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့မယ့် ဈေးသည်ရဲ့မျက်နှာကြီးကို မြင်မိတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့တောင် ဒေါသထွက်ရ ပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဈေးဆစ်ခြင်းတွေနဲ့ ဝေးသထက်ဝေးအောင် ကျနော်နေခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ ခိုင်မာစွာအမြစ်တွယ် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဒီဈေးဆစ်ခြင်းနဲ့ မဆုံစည်းရအောင် ကြာကြာ နေဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ မလွှဲမရှောင်သာလို့ ဈေးဆစ်ရရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် ကျနော်ကြိုးစားပြီး ဆစ် ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဈေးတည့်လို့ဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း ‘ဒီပစ္စည်းက တကယ်ပဲဒီလောက် တန်ရဲ့လား?ငါဆစ် တာနည်းများ နည်းသွားလား?’ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ စိတ်မောရပြန်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် ပစ္စည်းတစ်ခုမဝယ်ခင် အကြမ်းဖျင်း ဈေးနှုန်းသိရဖို့ ကြိုပြီးလေ့လာရတာလည်း အလုပ် တခုလိုဖြစ်လာပါတယ်၊ အဲဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါ ဈေးမေး ဈေးဆစ်ပြီးမှ မဝယ်ပြန်တော့ ဈေးသည် တချို့ရဲ့ မျက်စောင်း နဲ့အတူ နောက်ဆက်တွဲ ကောင်းချီးအပေါင်းကိုလည်း ဈေးမဆစ်ရဘဲနဲ့ ရရှိတတ်ပါသေးတယ်။
အဲဒီအခါဘာ့ကြောင့် သတ်သတ်မှတ်မှတ် တခွန်းဈေးနဲ့ မရောင်းနိုင်တာလဲ? ဘာဖြစ်လို့ တခါနဲ့တခါ မတူတဲ့ ဈေးအမျိုးမျိုးပြောကြတာလဲ? လို့ကျနော် ဥာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်၊ အကြောင်းအချက်တွေက တော့အများကြီးပါပဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းချင်းအတူတူ ဝယ်ရတဲ့ ဒိုင်မတူလို့၊ ကုန်စည်ဒိုင် တူပြန်တော့လည်း သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး စရိတ်စက မတူလို့၊ လမ်းမှာပေးရတဲ့ ဘာကြေးညာကြေးတွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေလို့၊ ဒီ့အပြင် ရွှေဈေးတက်လို့၊ ဒေါ်လာဈေးတက်လို့၊ ဓါတ်ဆီဈေးတက်လို့ စသဖြင့် စသဖြင့် အများကြီးပါပဲ၊ အခြေအနေတွေ ကအမျိုးမျိုးပြောင်း၊ စီးပွားရေးက ကျပ်သထက်ကျပ်လာ စတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာ ဈေးသည်တွေခမျာ ၁၀ တန်တဲ့ပစ္စည်းကို ၂၀ နဲ့ရောင်းဖို့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ဆန္ဒရှိကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တွေးကြည့် မိပါတယ်၊
စီးပွားရေးဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတာမို့ တည်ငြိမ်ပြီး အခြေခိုင်တဲ့ စီးပွားရေးစနစ် ဖြစ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံး အသိပါပဲ၊ ပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့တွေဟာ မြို့ပတ်ရထား စီးနေရသလို ပါပဲ၊ ဘယ်အကြောင်းပဲပြောပြော, ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘူတာပဲ ပြန်ဆိုက်တာ ပါပဲ။
ကျနော် ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက ဧည့်သည်တွေမေးသမျှထဲမှာ မဖြေချင်ဆုံး မေးခွန်းတခုကတော့ ဈေးဆစ်တဲ့အခါ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း ဆစ်ရမလဲ ဆိုတာပါပဲ၊ တဖက်က ဈေးရောင်းသူက ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်းဖြစ်ပြီး တဖက်ကဈေးဝယ်သူက ကျနော့်ကို ယုံကြည်စိတ်ချလို့ အားကိုးတကြီး တိုင်ပင်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဧည့်သည်၊ တကယ်တော့ ဘယ်လောက်ဈေးတင် ရောင်းတယ်ဆိုတာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်နေတဲ့ အကြောင်း ကျနော် ရှင်းပြရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေရာမှာဈေးဆစ်သင့်ပြီးတော့ ဘယ်လောက် ဆစ်သင့် တယ်...ဘယ်နေရာမှာ တော့ဖြင့် ဈေးမဆစ်သင့်ဘူး ဆိုတာသူတို့တွေ ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ပါဘူး၊ တခါက ကျနော့်ဧည့်သည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဈေးထဲမှာ ဗန်းကလေးရှေ့ချပြီး တရော်ကင်ပွန်း ခေါင်းလျှော်ရည် တစ်ထုပ်(၅)ကျပ်နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ အမယ်အိုဆီမှာ အတင်းဈေးဆစ်နေလို့ ကျနော်မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးနဲ့ ဝင်ရှင်းရဖူးပါတယ်။
အမှန်တော့ ဈေးဆစ်ခြင်းနဲ့ မယဉ်ပါးတဲ့ ဧည့်သည်တွေ အလွန်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံခြားသား ဧည့် သည်အလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ အမှတ်တရပစ္စည်း၊ ကြေးသွန်းပစ္စည်း၊ မြေဖုတ်ပစ္စည်း အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေး တွေရောင်းသူ အများစုကတော့ တော်တော်များများကို ဈေးတင်ရောင်းတတ်ကြပါတယ်၊ အကြောင်းသိဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့တွေတောင် တခါတရံ မျက်လုံးပြူးရလောက်အောင် ဈေးတင်ထားကြပါတယ်၊ ဒါတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်က ပစ္စည်းတိုင်းဟာ ဒီလိုပဲဈေးတင်ထားလိမ့်မယ်လို့ တွက်ဆတတ် ကြပါတယ်၊ ဈေးဆစ် ဖို့ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ကို နားလည်မှု၊ ဝယ်နေကျဖြစ်မှု၊ ပေါက်ဈေးကို အထိုက်အလျောက်သိမှု စတာ တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်၊ ဒါတွေကိုမသိတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေက ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင် အင်မတန် စိတ်ရှုပ်ရကြောင်း ဈေးဆစ်ရတဲ့ဒုက္ခကို ကျနော့်ရှေ့မှာ ညည်းတွားကြပါတယ်၊ ဈေးဆစ်ခြင်းကို မကြိုက်တဲ့ ကျနော့်အတွက် ထပ်ပြီးတော့ အနေခက်ရပြန်ပါရော...။
ဈေးဆစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်ရစရာလေးတခုက တခါမှာတော့ ကျနော့်ဧည့်သည်(၂)ယောက်နဲ့ မြေနီကုန်း ကနေမြို့ထဲသွားဖို့ Taxi ငှါးစီးပါတယ်၊ ကားတစ်စင်း ထိုးရပ်လာတော့ ကျနော်ကသွားမယ့်နေရာ ကားဆရာ ကိုပြောတယ်၊ သူကကျနော့် နောက်မှာရပ်နေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲဆီ တချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ဈေးပြော ပါတယ်၊ သူပြောတဲ့ဈေးက ပုံမှန်ပေါက်ဈေးထက် (၅)ဆ ကျော်ကျော်ကိုများနေတာ၊ ဒါနဲ့ ကျနော်က......
“ အကိုရာ..ဒီခရီးနဲ့ ဒီခရီး..အဲဒီလောက် မရှိပါဘူး ” လို့ပြောလည်းပြောရော သူကကျနော့်ကို ရန်လိုတဲ့
“ နိုင်ငံခြားသားတွေပဲကွ၊ သူတို့တတ်နိုင်တာပဲ၊ မင်းက ဘာဖြစ်လို့ ကြားထဲက ဈေးဝင်ဆစ်နေရတာလဲ? မင်းတို့ လိုကောင်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်မတိုးတက်တာ၊ ကိုယ့်မြန်မာ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းမှုကိုမရှိဘူး ” ဆိုပြီး စိတ်ဆိုး မာန်ဆိုးနဲ့ ကားကို တရကြမ်းမောင်းထွက်သွားပါတယ်။
ကျနော့်မှာ အံ့သြလွန်းလို့ ကြက်သေ,သေပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်၊ သူပြောတဲ့ မတရားဈေးကို မပေးတာနဲ့ အချင်း ချင်းရိုင်းပင်းမှုနဲ့ ကျနော်ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်လို့မရပါဘူး၊ ဧည့်သည်စုံတွဲကတော့ ပြုံးစစနဲ့ ‘ငါတို့ပါရင်တော့ မင်း ဈေးပိုပေးဖို့သာပြင်ထား’လို့နောက်နေပါတယ်၊ တကယ်တော့ သူတို့မြန်မာပြည်ကို ခဏခဏလာဖူးပြီးတော့ ဘယ်ခရီးကို ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်၊ (၅)ဒေါ်လာလောက် ပိုပေးရတယ်ဆိုတာ သူတို့အ တွက်ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ မတရားယူသင့် ပါရဲ့လား? တဖက်သားရဲ့ မသိနားမလည်မှုပေါ်မှာ ခုတုံးလုပ်ပြီး ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ ကျနော်တို့ တကယ်ပဲ လိပ်ပြာသန့်စွာ နေနိုင်ရဲ့လား?
အများအားဖြင့် ‘ငါတို့က ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားနေတာ၊ သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်လုပ်နေတာ’လို့ပြော တတ်ကြပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် ရိုးသားသန့်စင်တဲ့ ရောင်းဝယ်မှုကို မတော်လောဘ မစွက်စေသင့်ပါဘူး၊ လူရည်မလည်မှု၊ မသိနားမလည်မှု၊ ဈေးဆစ်မကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အခွင့်ကောင်းမယူသင့်ပါဘူး၊ တကယ်ဆိုရင် ပန်းလည်းလှစေ၊ ပျားလည်းဝစေ ဖြစ်ရမှာပါ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးဆစ်ခြင်းနဲ့ ကြားခံထားတဲ့ အရောင်းအဝယ်စနစ်ကြီး ထဲမှာ မှင်သေမှု၊ လူကဲခတ်တတ်မှု၊ ပါးနပ်လိမ္မာမှု တွေကတော့ ရောပြွမ်းနေမှာပါပဲ၊ အဲဒီထဲမှာမှ အမှန်ကို ပြောမှာလား? မုသာဝါဒနဲ့ အရောင်းအဝယ် ချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းညှိမှာလား? ဆိုတာ ကတော့ တဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ကျင့် တရားနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ သေချာတာကတော့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကျနော်တို့ဆက်ပြီး ဈေးဆစ် နေကြရဦး မှာပါပဲ။ ။
၅ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၇
Posted by ညီလင်းသစ် au 5.12.07
ကျနော်ကတော့ ဈေးဆစ်တဲ့ အလုပ်ကို လုံးဝကို မလုပ်တတ်လို့ တခွန်းဆိုင်တွေမှာပဲ ၀ယ်ဖြစ်တာများတယ်ဗျာ။ မတတ်သာလို့ တခွန်းဆိုင် မဟုတ်တဲ့ ဆိုင်မှာ ၀ယ်ရရင်လဲ ဗေထိဆိုတာနဲ့ ထိတော့တာပဲ။ ဈေးကြီးမိတာကိုပြောပါတယ်။ :)
အမှန်ကို ပြောမှာလား? မုသာဝါဒနဲ့ အရောင်းအဝယ် ချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းညှိမှာလား? ဆိုတာ ကတော့ တဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ကျင့် တရားနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်၊
I agree brother.Nice blog.
ဟုတ်တယ်။ ပိုက်ဆံပေးလည်း ၀ယ်ရသေး။ အလှည့်အပတ်လည်းခံရသေး။ လုံးဝမကြိုက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီမှာလည်း တစ်ခါတစ်လေ ဈေးဆစ်လို့ ရတယ်။ သူများဆိုင်ထက် ဈေးကြီးနေတာ ကိုယ်က ပြောနိုင်ရင် လျှော့ပေးတယ်။
တစ်လောက ခုံသွားဝယ်တာ ဆစ်လိုက်တာ ၃၀ လျှော့ပေးတယ်။ ပျော်ချက်။
အစ်ကိုနဲ့ ညီကတော့ ဒီနေရာမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပြီး ဟဟ ရေးအုံးမယ် အဲ့ဒီအကြောင်း ကုန်ကြမ်းရပြီဗျး)